Nhau - Hunhu uye mashandisiro emaindasitiri aluminium profiles
1. Kune akasiyana maratidziro uye hukuru, uye saizi yerutivi rurefu uye rwupfupi divi wakawanda. Semuenzaniso, edu akajairika 4040, 4080, 40120, 4040 akaenzana, mativi mana ari 40mm, uye 4080 ndiyo yakareba divi 80mm. Rutivi rwupfupi rwuri 40mm, uye rwakareba rwakapetwa ruviri rwepfupi. Ehe saizvozvo panewo akakosha iwo, senge makumi mana nemakumi matanhatu, iro rutivi rurefu rwuri 1.5 nguva yakapfupika.
2. Kune maviri chete slot upamhi, 8mm uye 10mm. Kunyangwe paine mazana ezvinotsanangurwa zvemaindasitiri aluminium profiles, yavo slots anongoita chete aya maviri saizi, kunyanya madiki, semuenzaniso, iyo 2020 slot iri 6mm. Uku kushandisa zvishandiso zvakajairika. Isu tinoziva kuti maindasitiri aluminium profiles anowanzo sunganidzwa nemabhaudhi nemakona emakona, uye izvi zvishongedzo ndezve zvakajairika zvirevo, saka kuungana kwezvishongedzo kunofanirwa kutariswa panogadzira aluminium profiles.
3. Kune maviri marudzi eyakajairwa nyika uye eEuropean standard. Musiyano uripo pakati peiyo European standard aluminium profile uye yenyika yakajairwa aluminium profile iri zvakare mune notch. Iyo yeEuropean standard ndeye trapezoidal groove ine hombe yepamusoro uye diki imwe. Iyo yenyika yakajairwa paburi iburi rekona, rakaenzana neepamusoro neepasi. Zvinobatanidza zvinoshandiswa mumatanho emunyika uye muyero weEuropean zvakasiyana. Ini pachangu ndinofunga kuti iyo yeEuropean standard maindasitiri aluminium chimiro iri nani. Iyo yeEuropean standard ine zvakawanda zvinotsanangurwa kupfuura muyero wenyika. Kune zvakare mamwe akajairwa asiri-akajairwa maindasitiri aluminium profiles, ayo anogona kushandiswa neEuropean akajairwa macomputer kana emunyika akajairwa zvinongedzo.
4. Ukobvu hwemadziro hwemaindasitiri aluminium profiles hauzove mutete zvakanyanya. Kusiyana nemapurani ealuminium ekugadzira, maindasitiri aluminium profiles anongotamba basa rekushongedza, uye ukobvu hwemadziro huchave hwakaonda kwazvo. Maindasitiri maaluminium profiles anowanzoita basa rekutsigira uye anoda humwe huremu hunotakura, saka ukobvu hwemadziro haufanire kuve mutete.
Maindasitiri aluminium mbiri chinhu chiwanikwa chiwanikwa, icho chine akasiyana mashandisiro uye chinonyanya kufarirwa mumusika wazvino. Nekuda kwekugona kwayo kwemavara, makemikari akanaka uye epanyama zvimiro, zvishoma nezvishoma inotsiva zvimwe zvinhu zvesimbi uye inova chinhu chinoshandiswa mumaindasitiri mazhinji.
Zvakare kutaura, maindasitiri aluminium profiles ari aluminium profiles kunze kwemasuwo nemahwindo, keteni remadziro aruminiyamu, uye ekuvaka ekushongedza aluminium profiles. Semuenzaniso, imwe njanji yekufambisa, muviri wemotokari, kugadzirwa uye inorarama aluminium inogona kunzi indasitiri aluminium chimiro. Mupfungwa nhete, yeindasitiri aluminium mbiri ndiyo gungano mutsetse wealuminium profile, inova chikamu chemuchinjikwa chakagadzirwa nesimbi yealuminium tsvimbo iyo inonyungudutswa uye inoiswa mufa kuti ibudiswe.
Rudzi rwemhando iyi rwunonziwo aluminium extrusion profile, maindasitiri aluminium alloy profile. Iyo ine akasiyana siyana ekushandisa uye inogona kushandiswa mumaindasitiri mazhinji. Zvakajairika mashandisirwo ekugadzira akasiyana emidziyo racks, zvishandiso zvinodzivirira, hombe yekoroni inotsigira, gungano mutsetse wekutakura mabhandi, masiki muchina mafuremu, vanogadzira uye mamwe marongedzero emidziyo. Heino sumo pfupi yekushandiswa kwemaindasitiri aluminium profiles mune yakamanikana pfungwa, seinotevera:
1. Equipment aruminiyamu furemu, aruminiyamu furemu
2.Musangano mutsara webhenji mabhanhire, bhandi rekutakura mutsara mutsigiro, musangano webasa rekushandira
3. Workshop chengetedzo fenzi, hombe michina yekudzivirira kavha, mwenje skrini uye arc-proof screen
4. Huru yekuchengetedza chikuva uye kukwira manera
5. Midziyo yekurapa bracket
6. Photovoltaic inokwira bracket
7. Mota simulator bracket
8. Masherufu akasiyana siyana, maraki, emakamuri ekurima emakamuri zvinhu zvemhando
9. Workshop zvinhu turnover ngoro, aluminium profile turu chingoro
10. Yakakura-mienzaniso inoratidzira ratidza racks, musangano ruzivo rwekuratidzira mabhodhi, whiteboard racks
11. Sun room, yakachena shedhi
Mukuwedzera kune izvo zvataurwa pamusoro zvataurwa pamusoro, zvinogona zvakare kuitwa mukati mehurongwa hwezvakasiyana zvigadzirwa. Kazhinji, unogona kuishandisa pese paunoda. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kune akawanda maratidziro emaindasitiri aluminium profiles, uye iwe unogona kusarudza zvigadzirwa zvinoenderana nezvaunoda iwe pachako kana uchisarudza. Ose akabatana neanoenderana nealuminium profile accessories, ayo akachengeteka uye akatsiga, uye ari nyore kukatanura.